Mmanya mgbako-enye gị ohere gbakọọ ọbara mmanya ịta larịị ke dabere nke ego na ụdị mmanya na-egbu mmanya, gị mmekọahụ, ibu ibu, na otú oge agafeela mgbe i si aṅụ mmanya. Ọzọkwa mmanya mgbako ka ị mara ma ọ bụrụ gị nwere ike ụgbọala a ụgbọala na ọbara ụfọdụ na-aba n'anya ọdịnaya na mba dị iche iche.
Ego ole ka ị na-aṅụ?
milliliters karama 0.33l karama 0.5l karama 0.75l gbaa 50ml wineglasses 0.2l FL oz
Biya Strong biya Martini Jin Wiski Mmanya Strong wine Brandi -aba n'anya Rọm Tequila Vodka ọzọ
Ị bụ: Nwoke Nwanyi
Gị ibu: 70kg 80kg 90kg 100kg ọzọ 50kg 60kg 70kg 80kg ọzọ
Ọtụtụ awa gafere: 0h 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h ọzọ h
Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Aruba Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Bhutan Bosnia na Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Burundi Cambodia Canada Chile Costa Rica Croatia Cuba Egypt El Salvador Eritrea Estonia Ethiopia Fiji Gambia Ghana Gibraltar Guatemala Guernsey Guinea Guyana Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Lithuania Malawi Malaysia Malta Mauritius Mexico Mongolia Mozambique Namibia Nepal Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Poland Qatar Romania Russia Samoa Saudi Arabia Singapore Slovakia Sudan Surinam Swaziland Sweden Tajikistan Thailand Tonga Trinidad na Tobago Tunisia Turkmenistan Uganda Ukraine Uruguay Uzbekistan Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe na Bermudas na Cayman Islands na Dominican Republic na Philippines na Solomon Islands
Ọbara mmanya ọdịnaya ma ọ bụ ọbara na-aba n'anya ịta (BAC) bụ ịta nke mmanya na ọbara. Ndị mmadụ na-tụrụ ka uka kwa olu. Mmanya mgbako na-enye ihe ndika ngụkọta oge, gị kpọmkwem ọbara mmanya ịta adabere na a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ ihe, dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa, onye ahụ ike, na-adịbeghị anya nri oriri.